पत्याउनु हुन्छ? - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , असार १६, २०७६
जापानीहरू मेहनती हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो काम प्रायः आफै गर्छन् । यो कुरा औसत जापानीमा मात्र नभै त्यहाँका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेमा पनि लागू हुन्छ । जापानजस्तो सम्पन्न देशका प्रधानमन्त्रीलाई नपुग्दो के होला ? उनका लागि काम गर्ने कर्मचारीहरूको अभाव पनि पक्कै छैन । पुरा पढ्नुहोस्
दक्षिण अमेरिकी देश पाराग्वेको सेकेन्ड डिभिजन क्लव टिम द रेसिस्टेन्सिया स्पोर्ट्स क्लबले आफ्नो स्टेडियममा लगाइएको एउटा रूखलाई आफ्नो आधिकारिक फ्यान घोषित गरेको छ । मानिसबाहेक अन्य वस्तुलाई आफ्नो फ्यान घोषित गर्ने यो क्लब संसारकै पहिलो क्लब हो । पुरा पढ्नुहोस्
तत्वहरूका आधारमा परिकार उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसका लागि रेस्टुराँले ग्राहकसँग खानाको अर्डर लिनुअघि ग्राहकको शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको जानकारी लिन उनीहरूको पिसाब, र्‍याल अथवा रगतको स्याम्पल लिनेछ । पुरा पढ्नुहोस्
हालै इराकको दक्षिणी बन्दरगाह शहर बसरामा एउटा परेवा ९३ हजार डलर अर्थात् १ करोड ५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । उक्त मूल्य संसारमा कुनै पनि परेवाले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा बढी हो । पुरा पढ्नुहोस्
मानव उदर अर्थात् हाम्रो पेटमा कति किसिमका जीवाणु पाइन्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ युरोपियन मोलेकुलर बायोलोजी ल्याब्रोटरी तथा वेलकम स्यांगर इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ताहरूले दिएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २२, २०७५
दुबईको बुर्ज अल अरब होटलमा गरिएको उक्त किनबेचमा एउटा जुत्ताले २ करोड ३६ लाख डलर मूल्य पाएको छ । शुद्ध सुन तथा १ सयभन्दा बढी हिरा जडान गरेर तयार पारिएको उक्त जुत्ता दुबईका एक व्यापारीले खरिद गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ २२, २०७५
मध्य इटालीको पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित ओलोलाई सहरको घट्दो जनसंख्यालाई दृष्टिगत गरी त्यहाँ मानिसको बसोबास बढाउन सहरका मेयरले त्यहाँ बस्न चाहने कुनै पनि परिवारका लागि तीन वर्षसम्म वार्षिक १० हजार डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ १४, २०७५
संसारको सबैभन्दा सानो गाई कत्रो होला ? हाम्रो सोचमा कुकुरजत्रो वा केही ठूलो ? तर अमेरिकाको मिसीसिपीमा संसारकै सबैभन्दा सानो गाईको बाच्छी फेला परेको छ । उक्त बाच्छीको तौल जम्मा साढे ४ किलो छ । पुरा पढ्नुहोस्
आधुनिक सिंगापुरका निर्माता लि क्वान यु स्थानीय जनताबीच कतिसम्म लोकप्रिय थिए भने उनको सम्मानका लागि त्यहाँका जनताले सिंगापुरमा बसोबास गर्ने प्राय: सबै जाति–नजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी मानव छाला संकलन गरेर त्यसको एउटा कोट बनाइ लि क्वान युलाई समर्पित गरेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्